कस्ले दियो यस्तो हसिन चेहरालार्इ यस्तो दर्दनाक पीडा? – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > कस्ले दियो यस्तो हसिन चेहरालार्इ यस्तो दर्दनाक पीडा? – भिडियो सहित
कस्ले दियो यस्तो हसिन चेहरालार्इ यस्तो दर्दनाक पीडा? – भिडियो सहित
admin April 27, 2018 जीवनशैली, भिडियो 0
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालको २०१ नम्बर शैयाबाट न्यायको याचना गरीरहेकी उनी रोशना रामुदामु । अस्पतालको शैयाबाटै हाम्रो कार्यक्रममा स्काइप मार्फत नेपाल प्रहरीको गाडीले आँफुलाइए ठक्कर दिएर उपचारमा वेवास्ता गरेको बताएकी थिइन । पब्लिक युथ क्याम्पसमा व्याचलर तेस्रो बर्ष अध्ययन गरीरहेकी २० वर्षिय रोशना र उनका दाइ रोनस फागुन १७ गते होलीको दिन मोटरसाइकल सवार थिए ।
सिनामंगलमा उनीहरु सवार मोटरसाइकललाई कमल पोखरी प्रहरी वृतको बा १ ज ७३२२ नम्बरको सिआरभी भ्यानले ठक्कर दियो । जवान रमन कार्कीले चलाएको भ्यानको ठक्करबाट रोशनाको टाउको पिँठ्यु, कम्मर र खुट्टामा चोट लाग्यो भने उनका दाजुको हात भाँचियो । तत्कालै उनलाई ट्रमा सेन्टर लगिएपनि आइसियु कक्ष खालि नभएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा लगियो । अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च कस्ले र्हेने भन्ने विवादकै कारण सुरुमा त उनको उपचार नै भएन । तर पछि प्रहरीले अस्पताल प्रशासन छलफल गरेपछि करीब ५ घण्टा लगाएर उनको शल्यक्रिया भयो ।
सामान्यतय अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारीको ठक्करबाट घाइते भएमा उपचारको सम्पुर्ण खर्च सवारी धनीले गर्ने प्रावधान छ । तर जब प्रहरीकै सवारीको ठक्करबाट घाइते भइन उनको उपचारको खर्च कसले दिने भन्ने नै समस्या सिर्जना भयो । उनी भन्छिन् ।
रबि लामिछानेलार्इ देश निकाला गर्नु पर्छ भन्नेहरूका लागि यस्तो कडा चेतावनी – भिडियो
‘साँझ परेको थियो…उहाँले मलाई तानेर कोठामा लानुभयो र के के गर्नुभयो! युवतीकाे कथा
‘कुरै नबुझी घमण्डी भन्दिने ?’ मेरो संघर्ष बल्ल सुरु भयो : यूट्युवमा भाइरल छुच्ची श्रीमति
नेपाली लोक दोहोरीमा हित गीत दिएकि शान्ति श्रीको आयो फेरि यस्तो मार्मिक गीत (भिडियो हेर्नुहाेस्)